Love – Page2– Askstyle
စေန ဆုိသည္မွာ စိတ္ႀကီးတယ္ …. ေဒါသျဖစ္လာရင္ ဘယ္သူကုိမွ ဘယ္အရာကိုမွ ထည့္မစဥ္းစားဘူး ထည့္လဲမတြက္တတ္ဘူး
... အမွန္တရားကုိေျပာရင္ လူတိုင္းလက္မခံခ်င္ၾကပါဘူး စေန ဆုိသည္မွာ စိတ္ႀကီးတယ္ …. ေဒါသျဖစ္လာရင္ ဘယ္သူကုိမွ ဘယ္အရာကိုမွ ထည့္မစဥ္းစားဘူး ထည့္လဲမတြက္တတ္ဘူး ဒါေပမဲ့ ေျပာပီးလုပ္ပီးသြားလို႔ သူမွားေနတဲ့ကိစၥကိုလဲ ျပန္ေတာင္းပန္ဖို႔ ဝန္မေလးတတ္ၾကဘူး စိတ္နာေအာင္ေတာ့ လာမလုပ္နဲ့ေသတဲ့အထိ မွတ္ထားတတ္တယ္ အၿငိဳးအေတးလဲႀကီးတယ္ အေပၚယံခင္မင္တာ မလုိလားဘူး သူငယ္ခ်င္း အစစ္ပဲ လုိခ်င္ႀကတယ္ ေယာင္လို႔ေတာင္ စေနကုိ…Read more →
၁- ကိုက်တယ်.....😬😬 😊(အမှတ် အသားလေး ပေါ်ရုံလောက်ထဲပါ 😖) ၂- ပါးပိတ် ရိုက်တယ်😕👋.. (ဖွဖွလေးနော်😜) ၃- အာဘွား ....ပေးတယ် ....😙😙 ၄- ဗိုက်ခေါက် လိမ်ဆွဲတယ်.... 👏👏😂😂 (နာနာလေး😖😖) ၅- ဆံပင်လေးပါ ဆောင့်ဆွဲတယ် (အသာလေး....😨😨 )😂 ၆- မထိတထိ လိုက်စတယ် ....😉😉😝 ၇- ကောက်စရာမရှိ…Read more →
ယောကျ်ားတစ်ယောက်က စွန့်ပစ်သွားလို့ အသဲကွဲစရာမလိုပါဘူး…
ေယာက္္ား တစ္ေယာက္ ပျစ္သားလို့အသဲၾကဲတယ္ ဆိုတာ ကိုယ့္အၾတက္ေတာ့ ရယၥရာပါ ။ ကိုယၠ အခ္စ္ႀကီးသလို အျစဲလႏ္းႀကီီးတယ္။ သစၥာတရား ဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ့အသကႅိဳ တႏၹိဳးထားတာ ။ ကိုယ့္အခ္စ္ေမတၱာကို ေအာကၱႏ္းစား အဆင့္နဲ့လာအသံုးခ္ၾသားရငႅၫ္း ေေသတာင္ ျခင့္မလႊတၻဴး။ ဒါ ကိုယ့္တႏၹိဳးေလ ။ ကိုယ့္ကိုေယ္အပၚယံနဲ့မခႏ္…Read more →
1. ဖုန်း screen မှာ ချစ်သူနဲ့ပုံကို တင်ထားပြီး တခြား အပြင်သွားတဲ့အခါ ကိုယ့်ပုံကို ပြန်ပြောင်းခြင်း (အစကထဲက မတင်ချင် မတင်နဲ့ပေါ့) 2. "ချစ်လား'" လို့ ကြည်ကြည်နူးနူး မေးရင် မချစ်ပါဘူးလို့ စနောက်ခြင်း (နောက်လို့ကောင်းတဲ့ အရာမှ မဟုတ်တာ) 3. မောင်တွေမတွေ ခေါ်နေရာကနေ ရန်ဖြစ်နေတုန်းမို့ ဆိုပီး နင်နဲ့ငါ လို့…Read more →
ဝေးကွာနေတဲ့ချစ်သူ(LDRS)တွေ တည်မြဲဖို့ ဒီအချက်တွေကို လုံးဝမမေ့သင့်ပါဘူး
😳😳 အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ Long Distance Relationship ဘဝဟာ ချစ်သူတွေ ကြားမှာ အခက်ခဲဆုံးနဲ့ အရှည်ကြာဆုံး ကာလ အပိုင်းအခြား တွေပါ။ အဲ့လို အချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် နားလည်မှုနဲ့ ယုံကြည်မှု သာမရှိရင် ရေရှည် တည်မြဲဖို့ ဆိုတာ တော်တော်လေး မလွယ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကြောင့် အဲ့လို…Read more →
သူမကိုချစ်နေမိပြီ”ဆိုတာကို ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဖွင့်ပြောသင့်သလဲ
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်တော့ချစ်နေပြီး ဖွင့်မပြောရဲသေးတဲ့သူတွေအတွက် ဘယ်လိုအချိန်တွေမှာ ဖွင့်ပြောဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမ စိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန် မိန်းကလေးတွေအများစုရဲ့စိတ်က တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေတတ်တာပါ။ စိတ်တိုတဲ့အချိန်ဆို တိုပြီး ချက်ချင်းပဲ စိတ်ကြည်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ မိန်းကလေးတွေရဲ့စိတ်က ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူမရဲ့ မျက်နှာ ၊ စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖွင့်ပြောသင့်တဲ့အချိန်ဆို ဖွင့်ပြောလိုက်ပါ။ သူမဘက်က အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန် သင့်ကို သူမဘက်ကလည်း အဖြေပြန်ပေးဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီးလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ပါ။…Read more →
စိတ်ထဲဘဝင်မတွေ့မိလို့ ရန်ဖြစ်တိုင်း လမ်းခွဲမယ်မဆိုလိုက်ပါနဲ့
" လမ်းခွဲမယ် " " လမ်းခွဲမယ်" နဲ့ ထစ်ကနဲ့ရှိ စိတ်ထဲ ဘဝင်မတွေ့မိလို့ ရန်ဖစ်တိုင်း မဆိုမိပါစေနဲ့။ နှလုံးသားနဲ့ ထုံမွှမ်းထားတဲ့ တို့နှစ်ယောက် အချစ်ဇတ်လမ်းဟာ လမ်းခွဲမယ် ပြောတိုင်း ပြတ်ဆဲ ရတော့မှာလား။ ဖုန်းဆက်လို့ ဖုန်းမကိုင်မိတဲ့ အခိုက်အတန့် တဖက်သားအတွက် ခံရခက်တဲ့ စွတ်စွဲချက်တွေနဲ့ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ရေးကို သံသယဆူးကြိုးနဲ့ ခတ်တော့မလို့လား???? Reply…Read more →
စုံတွဲတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ single မိန်းကလေး တယောက်ဖြစ်ရတာဟာ တကယ်တော့ စိတ်ထဲ ကသိကအောက် ဖြစ်စရာကောင်းလှပါတယ်။ တခါတရံမှာ “ငါများ ကံမကောင်းလို့ ဘယ်သူမှမကြိုက်တာလား” လို့တောင် တွေးထင်မိစရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လဲ ကိုယ်ဟာ အပြစ်အနာဆာလဲ မရှိ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဒီ အကြံပေးချက်လေးတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ မမှားဘူးနော်..။ ၁။ အများကြီးမတွေးနဲ့ Sis…Read more →
( ၁ ) ကိုယ် တစ်ကယ် ချစ်တဲ့ သူကို တွေ့ခဲ့ရင် သူနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လက်တွဲသွားဖို့ အခွင့်အရေး ရအောင် ကြိုးစားပါ ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ " သူ ထွက်သွားတဲ့အခါ အရာအားလုံး နောက်ကျသွားပါလိမ့်မယ် ။ ( ၂ ) ကိုယ် တစ်ကယ် ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကို တွေ့ခဲ့ရင်…Read more →
ချစ်သူရဲ့..ထားသွားခြင်း ခံရတဲ့ အခါ …
သတိရ တယ် ဆိုပြီး ... တောင်တွေး မြောက်တွေး ကြေကွဲ မနေပါနဲ့ ... ကိုယ့်ဆီမှာ မနေချင်လို့ ပြေးထွက် သွားတဲ့ သူက ကိုယ့် အကြောင်းကို တွေးနေမှာ မဟုတ်ဘူး ... သစ္စာရှိ လှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး ... မျှော်တော်ယောင် လုပ်မနေ ပါနဲ့ ... သင် နဲ့ ပတ်သတ်ခဲ့…Read more →